Chelsea Oo Wembley Stadium Ku Dubatay Man United, Lampard Oo Finalka FA Cupka Balan Kaga Samaystay Mike Arteta Iyo Rajadii Solskjaer Oo La Burburiyay. - Gool24.Net
Chelsea Oo Wembley Stadium Ku Dubatay Man United, Lampard Oo Finalka FA Cupka Balan Kaga Samaystay Mike Arteta Iyo Rajadii Solskjaer Oo La Burburiyay.
July 19, 2020 Mahamoud Batalaale
Chelsea ayaa iska xaadirisay finalka koobka FA Cupka kadib markii ay Wembley Stadium ku dubatay Man United, waxayna kooxda Frank Lampard ee Blues ay isla Wembley Stadium balan kaga samaysatay kooxda ay London ka wada dhisan yihiin ee Arsenal oo xalay guul ka gaadhay Man City.
Chelsea waxaa guushan ku hogaamiyay Giroud iyo Mount oo min hal gool dhaliyay halka kabtanka Man United ee Harry Maguire uu goolka saddexaad ee Blues uu iska dhaliyay. Dhamaadkii ciyaarta Bruno Fernandes ayaa gool rekoodhe ahaa u dhaliyay Man United.
Frank Lampard iyo Mikel Arteta midkood ayaa koobkiisii ugu horeeyay ee Chelsea ama Arsenal ku guulaysan doona marka ay finalka FA Cupka iskaga hor iman doonaan Gunners iyo blues.
Chelsea iyo Man United ayaa u tartamayay sidii ay Arsenal ugula balami lahaayeen finalka Wembel Stadium ee koobka FA Cupka waxayna labada kooxoodba doonayeen in ay u sii dhawaadaan fursad ay koob ugu guulaysan kareen balse arinta ayaa noqotay gari lama nin kama wada qosliso.
Daqiiqadii 10 aad Chelsea ayaa heshay fursadii ciyaarta ugu horaysay kadib markii uu da’yarka Blues ee Reece James uu darbo gantaal ah ku ganay goolka United waxaana si xoogan kubbada goolka gali lahayd ku joojiyay David De Gea.
Laakiin intaas kadib ciyaarta ayaa noqotay mid ay labada kooxoodba kala cabsanayeen laakiin Frank Lampard ayaa ku guulaystay inuu ciyaartoyda kooxdiisa u soo dhigay taatiko ay Bruno Fernandes ugu qaseen inuu ciyaarta u yeedhiyo xidigaha khadka dhexe ee United.
Daqiiqadii 32 aad Bruno Fernandes ayaa helay fursadii ugu fiicnayd ee Man United kadib markii uu darbo laaga xorta ah ku tuuray goolhaye Willy Caballero kaas oo kooxdiisa Blues gool cadaan ah ka joojiyay.
DAQIIQADII 42 AAD Man United ayaa dhibaato wayn la kulantay kadib markii ay madaxa si xun iskugu dhufteen Eric Bailly iyo Harry Maguire waxaana loo baahday ilaa 10 daqiiqo in ciyaarta loo joojiyay in xaalad murugo leh uu galay Bailly taas oo keentay in ugu danbayn ciyaarta laga dhex qaaday waxaana ciyaarta la soo galiyay Martial.
Sababta uu Solskjaer ciyaarta u soo galiyay Martial ayaa ahayd in uu gabi ahaanba badalo taatikadii uu markii hore ciyaarta ku soo galay oo aad loo dhaliilay waxayna waqti badan ay ciyaartu taagnayd la bilaabay 5 daqiiqo oo dheeri ahaa oo ciyaarta lagu daray.
DAQIIQADII 45+11 aad Chelsea ayaa ugu danbayn jabisay ismari waagii ciyaarta kadib markii uu Olivier Giroud uu dhaliyay goolka wadnaha taabtay Man United wuxuuna caawin ka helay Azpilicueta taas oo keentay in dhamaadka waqtigii dheeriga ahaa ay Chelsea hogaanka ciyaarta 1-0 ku qabtay.
Laakiin markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta ayay Man United ku fikiraysay in ay iska soo celiso goolka dhaamadka qaybtii hore laga dhaliyay laakiin Blues ayaan United siin waqti ay ku fikirto.
DAQIIQADII 46 AAD Chelsea ayaa si layaableh u heshay goolkeeda labaad ee ay musiibada ku dhex galisay kooxda Solskjaer ee United waxaana goolka labaad dhaliyay da’yarka saamaynta badan ee Mason Maunt kaas oo ka faa’iidaystay qalad xun oo ay United samaysay.
Williams ayaa kubbad liidata u bixiyay Fred laakiin Mason Mount ayaa awooday in uu kubbada dhexda ka qabsado wuxuuna David De Gea u diiday in uu wax badbaadin ah sameeyo waxayna ciyaartu noqotay 2-0 ay Blues kalsooni wayn ku heshay.
Halkan ka daawo qaabkii lama filaanka ahaa ee uu David De Gea u badbaadin kari waayay kubbada dhulka socotay ee uu Mount ka soo tuuray meel ka baxsan xerada ganaaxa United.
Daqiiqadii 56 aad Solskjaer ayaa hal mar ciyaarta soo wada galiyay Mason Greenwood iyo Pual Pogba wuxuuna saaray Fred iyo Daniel James oo fashil ciyaarta ugu dhex jiray.
Chelsea ayaa iska lumisay fursado cajiib ah oo ay Man United xaalada ugu sii xumayn lahayd laakiin United ayaa wali raadinaysay qaabkii ay ciyaarta ugu soo laaban lahayd.
DAQIIQADII 74 AAD Kabtanka Man United ee Harry Maguire ayaa murugada kooxdiisa United heer kale u qaaday kadib markii uu iska dhaliyay goolka saddexaad ee Chelsea waxaana Maguire goolkan sabab ugu noqday Alonso oo kubbad soo hor mariyay goolka United waxayna ciyaartu noqotay 3-0 ay Blues ku dubanayso United.
Daqiiqadii 80 aad Lampard ayaa ciyaarta ka saaray Giroud oo goolkii furitaanka dhaliyay iyo Willian wuxuuna keenay C. Hudson-Odoi iyo Abraham halka Solskjaer uu saaray Wan-Bissaka oo uu ku soo badalay Fosu-Mensah.
REKOODHE! Daqiiqadii 85 aad Man United ayaa rekoodhe lagu abaal mariyay kadib markii uu Hudson-Odoi qalad ku galay Martial oo xerada ganaaxa Blues ku jiray.
DAQIIQADII 85 AAD Bruno Fernandes ayaa kala diray goolhaye Caballero wuxuuna sidaa xidiga reer Porugal ku dhaliyay goolka soo daahay ee United ay ugu danbayn ku gaadhay shabaqa Blues waxayna ciyaartu noqotay 3-1 ay Blues laba gool hogaanka ugu hayso.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 3-1 ay Chelsea ku dubatay Man United waxayna guusha Blues ka caawisay in ay finalka koobka FA Cupka u soo baxeen waxayna wada ciyaari doonaan Arsenal.